OPPO A92 က Price to performance အရ ဘယ်လိုအနေအထားရှိလဲ? – unique.com.mm
OPPO A92 က Price to performance အရ ဘယ်လိုအနေအထားရှိလဲ?
ဇူ 03, 2020
YouTube Link https://youtu.be/GryMj7TiFqM မှာ သွားကြည့်လို့ရပါတယ်။☺☺☺
#UNiQUETechReview #SmartphoneReview #MyanmarTechReview #Oppo_A92 #Oppo_A52 #Colourful #RAM_8G #48MP_Camera
ဖုန်း - (၀၉) ၈၉ ၂၀၀၀ ၂၀၀၊ (၀၉) ၆၇ ၂၀၀၀၂၀၀၊ (၀၉) ၆၈ ၂၀၀၀ ၂၀၀ ဖြစ်ပါတယ်။